Fact Check: ဒီဓာတ်ပုံတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက ဒုံပွဲတော်က ဓာတ်ပုံတွေသာဖြစ်တယ်￼ - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
Fact Check: ဒီဓာတ်ပုံတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက ဒုံပွဲတော်က ဓာတ်ပုံတွေသာဖြစ်တယ်￼
May 23, 2022 May 23, 2022 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: ဒီဓာတ်ပုံတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက ဒုံပွဲတော်က ဓာတ်ပုံတွေသာဖြစ်တယ်￼
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(PDF)တွေ အသေးစားဒုံးပျံယာဉ် တစ်စင်းကို တီထွင်ပစ်လွှတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုပြီး ဓာတ်ပုံ ၃ ပုံနဲ့အတူ မျှဝေထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုရာဂဏန်းက ပြန်လည်မျှဝေလျှက်ရှိပါတယ်။ သို့သော် ဓာတ်ပုံတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ ဒုံးလွှတ်ပွဲတော်အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗွီဒီယိုပါမြင်ကွင်းတွေဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။
“အမည်မဖော်လိုသည့် တောတွင်းတစ်နေရာက PDF တွေ
ဒုံးပျံယာဉ်အသေးစား တစ်စင်းကို တီထွင်ပစ်လွှတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရ”လို့ရေးသားပြီး “Commu Nal Phyo” အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ် အသုံးပြုသူက အောက်ပါအတိုင်း မျှဝေထားပါတယ်။
အလားတူမျှဝေမှုတွေကို ဒီနေရာ၊ဒီနေရာ၊ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
Google မှာ ပုံရှာနည်း၊ အဓိကျကျတဲ့စကားလုံးအချို့အသုံးပြုပြီးအကြောင်းအရာကို ရှာဖွေနည်းနဲ့ ရှာဖွေရာမှာ ဒီဓာတ်ပုံတွေဟာ ထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ “อีสานโปรดักชั่น”လို့ရေးသားထားတဲ့ ယူကျု့(youtube) ချန်နယ်မှာ တင်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေနဲ့ တူညီတာတွေ့ရပါတယ်။ Google Translate အသုံးပြုပြီး ဒီဗွီဒီရဲ့ ခေါင်းစဉ်စာသားအဖြစ်ရေးသားထားတဲ့ ထိုင်းစားသားအချို့ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုကြည့်ရာမှာ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။ “#Bong Fai Lan #Advada #Isaan Productions
Million fireballs! The team of “Advada”, 8 inch pipe, Bun Bang Fai, Lanna Wiang, province. Yasothon 65 “
“ဖျောက်သန်းပေါင်းများစွာ – Yasothon ခရိုင်က Bun Bang Faiတွင် ၈ လက်မပိုက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ဒုံးပျံကို “Advada”အဖွဲ့ကလွှတ်တင်စဉ်”ဆိုပြီးရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ (Fact Cresendo မှ Google Translate ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို မြန်မာဘာသာသို့အနီးစပ်ဆုံး ဘာသာပြန်ဆိုတည်းဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်)
ဒီယူကျု့ချန်နယ်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက ဒေသတွင်းကဗီဒီယိုအများအပြားကိုတင်ထားပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေက ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒုံးလွှတ်ပွဲတော်ဗီဒီယိုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။
မူရင်းလင်ခ့် – อีสานโปรดักชั่น | Archive link
“Bun Bang Fai”လို့ ထိုင်းမှာလူသိများတဲ့ ဒုံးလွှတ်ပွဲတော်ဟာ အထူးသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်း Isaan ဒေသမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက် မိုးခေါ်တဲ့အနေနဲ့ ကျင်းပတဲ့ဓလေ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Yasothon ဆိုတာ ဒီဒေသက ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
PDF တွေအောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်လိုက်တဲ့ ဒုံးပျံလို့ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပုံအချို့နဲ့ ဒီယူကျု့ချန်နယ်က တင်ထားတဲ့ ၁၁ မိနစ် ၂၈ စက္ကန့်ရှည်လျားတဲ့ ဗွီဒီယိုပါ မြင်ကွင်းအချို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါအချက်အလက်တွေအရ ထိုင်းနိုင်ငံက ဒုံလွှတ်ပွဲတော်အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗွီဒီယိုပါမြင်ကွင်းတွေ ကို အသုံးပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံက PDF ဒုံပျံလွှတ်တင်တာအောင်မြင်တယ်ဆိုပြီးရေးသားမျှဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်.
Title:Fact Check: ဒီဓာတ်ပုံတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက ဒုံပွဲတော်က ဓာတ်ပုံတွေသာဖြစ်တယ်
Tagged Claim ReviewPDFဒုံးပျံ
Fact Check: PDF တွေဝင်လာလို့ရွာသားတွေထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှား
Fact Check: NUG က ပန်ဆယ်လိုကို ဘွန်းရောင်းခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုတဲ့ သတင်းမှား
Fact Check: အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရောက် ဟိန္ဒူသာသနာပြုအဖွဲ့ပုံ ကို ဆော်ဒီအာရေးဗီယားက သံဃာတွေအဖြစ်မျှဝေ
January 27, 2021 June 1, 2022 နေရာမောင်
Fact Check: NUG ရဲ့ လုပ်ကြံမယ့်စာရင်းရှိသလား-မဟုတ်ပါ
November 23, 2021 June 1, 2022 Zun Zee
သမိုင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတစ်ခုကို ပုံဖျက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖိုးအဖြစ်ဖော်ပြနေ တဲ့ အချက်အလက်မှား
September 14, 2020 June 1, 2022 နေရာမောင်